दिनेश प्याकुरेलको आत्मा, चन्द्रदेव जोशीको आंशु र नविन पौडेलको लालपूर्जा
बाबुराम ढकाल मंगलवार, माघ २८, २०७६, १०:२१:०० मा प्रकाशित
तस्बिर : चन्द्रदेव जोशी (बायाँ) र दिनेश चन्द्र प्याकुरेल (दायाँ )
नेदरल्यान्डसबाट स्यानिटरी इञ्जिनियरिङमा एमएससी गरेका दिनेशचन्द्र प्याकुरेल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव थिए । २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर ‘भ्रष्टाचारी माथि कारवाही गर्ने’ हल्ला पिटाए । भक्तवहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित शाही आयोगले शेरवहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंहलाई भ्रष्टाचारकै आरोपमा थुन्यो । बजार हल्ला चल्यो—अबको पालो प्याकुरेलसहितका सचिवहरुको हो ।
हल्ला कति सही थियो वा गलत पुष्टि हुन वांकी नै थियो २०६२ जेठ २६ गते विहान प्याकुरेलले आत्महत्या गरे ।
२०६७ सालमा डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती जनस्वास्थ्य महाशाखाको प्रमुख थिए । अख्तियारले औषधि खरिद लगायतका विभिन्न कामहरु गर्दा भ्रष्टाचारको आरोपमा उप्रेतीसहितका करिब १ दर्जन व्यक्ति विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्यो । उप्रेतीलाई निकै नजिकबाट चिन्ने म जस्ता धेरै मान्छे ‘छाङगाबाट खसेजस्तो’ भयौं । किनकी उनको इमान्दारितामाथि उनलाई चिन्नेहरु कसैलाई पनि शंका थिएन । अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको केही दिनपछि म घरमा पुगेको थिएं । ‘कसैले फसायो कि कसरी यस्तो भयो, डा.साव?’ भन्ने मेरो प्रश्नमा डा उप्रेतीले एक वाक्यमा भनेको कुरा मैले अहिले पनि सम्झन्छु—अख्तियारले आफ्नो काम गरेको छ, मैले कुनै गल्ती नगरेको हुनाले अदालतप्रति विश्वांस छ ।
नभन्दै विशेष अदालतले त्यो प्रकरणका धेरैलाई दोषि ठहर गर्यो । तर, उप्रेतीलाई भने सफाइ दियो । उनी स—सम्मान पुर्नवहाली मात्र भएनन्, बढुवा भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव नै भए । अहिले अवकाश जीवन विताइरहेका उप्रेती भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका थोरै स्वास्थ्य सचिवहरुमध्ये एक हुन् ।
यहां यी दुईवटा घटना उल्लेख गर्नुको आसय नेपालमा भ्रष्टाचारको छानविन कसरी हुने गरेको छ भन्ने प्रष्ट्याउनु हो । ‘भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्ने हल्ला’ले कोही मानिसलाई कति विचलित बनाउंछ भन्ने कुराको उदाहरण पूर्व सचिव दिनेशचन्द्र प्याकुरेल हुन् भने आफू ठीक छु भने अख्तियारले आरोप लगाउंदैमा आत्तिनु पर्दैन भन्ने कुराको उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती हुन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले १७५ जनालाई मुद्धा दायर गरेपछि अहिले विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । खासगरि अख्तियारले मुद्धा दायर गरेका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीको इमान्दारिता, माधव नेपाल र डा.बावुराम भट्राईको पालामा भएका निर्णयहरुको स्वामित्व र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविनको लालपूर्जा र अख्तियारको स्वतन्त्र निर्णय प्रकृया माथि धेरै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यी विषयमा एकछिन पछि चर्चा गरौंला । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अख्तियारको नियतप्रति जसरी आवाज उठाइरहेको छ र कांग्रेस केन्द्रिय समितिमा भएको छलफल भन्दै संचार माध्यममा जसरी समाचार आइरहेका छन्, त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ गच्छेदार मात्र होइन, सिंगो कांग्रेस नै विछिप्त बनेको छ । अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा कांग्रेसले जसरी ‘सुनियोजित घटना’ भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ, त्यसले के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाली कांग्रेस नेपालको अहिलेको कानुनी व्यवस्था प्रति विश्वांस गर्दैन । ल मानिलिउं अख्तियार सरकारबाट प्रभावित भयो रे, अदालत त छ नी । सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझैं ‘हिजो हामी सरकारमा हुंदा अदालतलाई हाम्रो आदेशमा हिंडाएकै हो, आज ओलीहरुले पनि त्यही गर्छन्’ भन्ने आधारमा शंसकित भएको हो भने हामीजस्ता ‘भूईमान्छे’हरुले बुझ्ने कुरा भएन । त्यस्तो खेलको कुरा शेरवहादुर देउवा र विजय गच्छेदारहरुवाहेक अरु कस्ले बुझ्ला ? अर्काे कुरा ‘पार्टीको झण्डा हल्लाउंदै’ अदालतमा न्यायाधिश भएकाहरु केवल नेकपाका मात्रै छैनन् भागवण्डाको आधारमा नेपाली कांग्रेसको पनि लगभग उति नै क्याडरहरु छन्, अझ पहिलेदेखि भएकोले धेरै छन् । नविन पौडेलको जग्गा फिर्तामा षडयन्त्र देख्ने गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माहरुले न्यायाधिश कुमार रेग्मीको बारेमा चुइंक्क पनि नबोल्नुको अन्तर्य कस्लाई थाहा छैन र ?
अख्तियारले मुद्धा दायर गर्दैमा विजय गच्छेदारहरुले ‘चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा उचालेको’ जस्तो गरी ‘कांग्रेस माथि नै प्रहार भएको’ देख्नुले गच्छेदार कति अत्तालिएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यदि नविराएको हो भने अख्तियारले मुद्धा दर्ता गर्दैमा क्यारियर सकिदैन, ससम्मान पुर्नवहाली भएर माथिल्लो पदमा पुग्न सकिन्छ, झन धेरै मान सम्मान पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. उप्रेती हुन् । माननीय गगन थापाज्यू तपाईलाई एउटा सुझाव—तपाई स्वास्थ्य मन्त्री हुंदा स्वास्थ्य सचिव रहेका डा. उप्रेतीको जीवनी एक पटक बुझ्नुस र नेपालको कानुनी व्यवस्थाप्रति विश्वांस राख्न सिक्नुस् । त्यस्ले तपाईलाई तथ्य बुझ्न र नेपालको न्यायिक व्यवस्थाको अवस्था बुझ्न सहयोग गर्नेछ ।
जहांसम्म विष्णु पौडेलको छोरा नविन पौडेलको लालपूर्जाको प्रसंग छ । पृथ्वीनारायण शाहले ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका सत्रु हुन्’ भनेका थिए रे भन्ने वाहेक नेपालमा घुस दिने मान्छेलाई दोषि देख्ने प्रवृत्ति नै छैन । घुस वा अनियमितता भन्ने वित्तिकै कम्तिमा दुई पक्ष हुन्छ । तर, नेपालको ‘प्राक्टिस’मा अपवादमा वाहेक घुस खाने मान्छे मात्रै दोषि हुन्छ, घुस दिने मान्छे दोषि हुदैंन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने कर्मचारी र व्यापारी संगसंगै जेल जान्थे । तर, नेपालमा कर्मचारी भ्रष्ट ठहर हुन्छ, उसैलाई घुस दिने व्यापारी चांही ‘साला कर्मचारी चोर हुन्छन्, कामै गर्दैनन्’ भन्दै हिड्ने अवस्था आउंदैनथ्यो ।
विष्णु पौडेल र उनको छोरा नविन यो घटनाका ‘पहिलो पार्टी’ होइनन् भन्ने निश्चित भैसकेको छ । ‘दोस्रो वा तेस्रो पार्टी’ पनि होइनन् । पहिलेदेखि खरिद विक्री भैरहेको जग्गा ‘सस्तो मूल्य’मा पाउंदा ‘खरिद गरेको’ देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले यो जग्गा विवादास्पद हो भनेर खबरदारी गर्दा गर्दै राजनीतिक दवाव दिएर विष्णु पौडेलको बाबु छोराले पास गराएको भए त्यो अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । अहिलेसम्म पौडेलका बाबु छोराले अनधिकृतरुपमा जग्गा खरिद गर्न वा पास गर्न कंही कसैलाई दवाव दिएको सुन्नमा आएको छैन । यदि विष्णु पौडेलले नियतवस नै ‘माफियागिरी’ गरेको भए ‘गहतको झोलमा जात फाल्ने’ काम पक्कै गर्दैनथे, अरु २,४ रोपनी नै हत्याउंथे । शायद अख्तियारले पौडेलको ‘यही नियत’ परिक्षण गर्यो र मुद्धा नचलाउने निर्णय गर्यो । शायद बाबुराम भट्राई र माधव नेपालको बारेमा पनि अख्तियारको बुझाइ त्यस्तै थियो । यदि पौडेलका बाबुछोरा वा नेपाल र भट्राईको नियतप्रति शकां छ भने अख्तियार र अदालतमा ‘प्रमाणसहित’ मुद्धा दायर गर्न सकिन्छ । तर, उनीहरु विरुद्धमा ‘प्रमाण नदिने’, विष्णु पौडेलको छोरा नविनले जग्गा खरिद गरेको विषयमा कुरा उठाउने र त्यही प्रकरणमा त्यही तरिकाले जग्गा खरिद गरेका न्यायाधिश कुमार रेग्मीको नियतको बारेमा कुरा नउठाउनुले यसप्रकरणको ‘राजनीति’ स्पष्ट हुन्छ ।
निश्चित हो, अरु विकसित देश युरोप, अमेरिका वा एशियाकै पनि जापान जस्ता देशमा भएको भए यस्तो घटनामा विष्णु पौडेल मात्र होइन, माधव नेपालदेखि बाबुराम भट्राईसम्मको राजनीति अर्कै मोडमा पुग्ने थियो । किनकी त्यहां इमान र जमानको राजनीति हुन्छ, एउटा मुद्धा उठेपछि त्यसको जिम्मेवारी लिएर नेताहरु राजिनामा दिन्छन् र जनताको ‘कसी’मा आफै उत्रिन्छन् । तर, नेपाल लगायतका अविकसित र अल्प विकसित देशमा कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर आफूलाई ‘इमान्दार’ भएको देखाइन्छ र पद, सत्तामा टिकिरहने गरिन्छ । कानुनी छिद्र र नैतिक मूल्य मान्यता विचको फरक छुट्याउने संस्कारको विकास नभएसम्म यस्तो नियति सधैभरि दोहोरिइरहन्छ ।
अब चन्द्रदेव जोशीको बारेमा कुरा गर्नु अगाडि भ्रष्ट र इमान्दार व्यक्तिको चरित्र चित्रणको बारेमा केही चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा (शायद अरु देशमा पनि त्यस्तै हो) भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा लुटपुटिएको मान्छेको जीवन शैली अरुको भन्दा निकै फरक हुन्छ । उ आफूलाई सादगी देखाउन निकै प्रयत्न गर्छ, चिट्ट परेको ‘ड्रेसअप’, एक एक कुरा तौलिएर निकै मिठो तरिकाले वोल्छ, अरुलाई आत्मैदेखि सम्मान गरेको जस्तो देखाउंछ । आत्मा र परमात्माको कुरा गर्छ, पाप र धर्मको कुरा गरिरहन्छ । मठ मन्दिर धाइरहन्छ । हातमा कम्तिमा २,३ वटा औंठी लगाउंछ । घुमाउरो तरिकाले आफूलाई सभ्य र जान्ने हुं भन्ने देखाउने प्रयत्न गरिरहन्छ । फलना ठाउंमा त यस्तो छ भन्दै देश विदेशको गफ गरिरहन्छ । सुगर, प्रेसरको औषधि खाइरहने हुनाले औषधि र अस्पताल, डाक्टरको बारेमा निकै जानकार हुन्छ ।
इमान्दार मान्छे त्यस्तो हुदैन । उ देखेको कुरा बोल्छ, तौलिएर बोल्दैन । विन्दास पाराको हुन्छ, कसैसंग डराउंदैन । त्यसैले आडम्बर हुदैन । खानपिन देखि लिएर लवाइ खुवाइ समेत साधारण हुन्छ । उसले काम गरिरहेको हुन्छ, तर त्यसको ‘मार्केटिङ’ गर्दैन । जबकी आडम्बरी र भ्रष्ट मान्छे काम भन्दा बढी ‘मार्केटिङ’ गरिरहेको हुन्छ । त्यस्ता मान्छेलाई परिणाम जेसुकै होस्, आफ्नो प्रचार भए पुग्छ ।
अपवादमा कोही हुनु अलग्गै कुरा अन्यथा भ्रष्ट र इमान्दार मानिसको जीवन शैलीको मुख्य अन्तर त्यही नै हो ।
पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीका छोरा अरुणदेव जोशी मेरो ‘चिया साथी’ हुन् अर्थात् बाटामा भेट्दा कसिलो हात मिलायो, चिया पियो, सुखदुखका गफ गर्यो, विदा भयो । सामान्यतया भ्रष्ट व्यक्तिलाई चिन्न वर्षाैं लाग्न सक्छ, किनकी उसको जीवनशैली र पारिवारिक तथा सामाजिक सम्वन्धहरु जहिले पनि शंकास्पद हुन्छ । रहस्यमय हुन्छ । चन्द्रदेव जोशीलाई नचिने पनि उनी कस्ता हुन् भन्ने चिन्न सकिन्छ । सामान्य जीवनशैली, छिमेकीहरुसंगको सम्वन्ध, उनको हिड्ने, डुल्ने शैलीबाट प्रभावित भएकाहरु धेरै भेटिन्छन् । मैले धेरै जना उच्च पदस्त अधिकारीका छोराछोरीको संगत गरेको छु तर अरुण जस्ता ‘विचरा’ छोराहरु कमै पाएको छु । त्यस्तो ‘भ्रष्टाचारी बाबु’को सन्तान त्यस्तो हुनसक्छ ? अंह पत्याउन सकिने कुनै आधार छैन ।
अख्तियारले मुद्धा दायर गरेपछि आएको चन्द्रदेव जोशीको प्रतिकृयाले पनि उनको नियत र हैसियत के हो भन्ने स्पष्ट पार्छ । लाग्छ—पुस्कर समशेरले झण्डै एक शताब्दि अगाडि परिवन्ध कथा लेख्दा आजका चन्द्रदेव जोशी र सेनेन्द्र उप्रेतीहरुको अनुहार सम्झिएका थिए । चन्द्रदेव जोशीलाई एउटा मात्रै अनुरोध—तपाईको नियत र इमान्दारिताप्रति कसैलाई शंका छैन, शायद अख्तियारका हाकिमलाई पनि शंका छैन । ‘परिवन्ध’ र नियत फरक कुरा हो र त्यसलाई अख्तियारले छुट्याउन नसकेपनि अदालतले छुट्याउन सक्छ भन्नेमा म चांही विश्वस्त छु ।
अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैली र नियतप्रति केही टिप्पणी । निश्चित छ, गृहमन्त्री रामवहादुर थापा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो घटना दवाउन चाहेको भए कम्तिमा केही वर्ष गुपचुप रहन्थ्यो । उनीहरुले लुकाउन नचाहेकै कारण छानविन समिति गठन भएर त्यो सार्वजनिक भएको हो । छानविन समिति गठन गर्नेदेखि लिएर त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नेसम्मका कामहरुमा जसरी सरकारले सहजीकरण गरेको देखिन्छ, त्यसले गर्दा यो घटना लुकाउन होइन, सार्वजनिक र भण्डाफोर गर्नमा सरकारको भूमिका रहेको स्पष्ट हुन्छ । यति प्रकरण लगायतका थुपै्र काण्डहरुमा ओली सरकारको नियत शंकास्पद छ, भ्रष्ट मनोवृत्ति देखिन्छ तर वालुवाटार काण्डको छानविनमा सरकारले जसरी रवैया देखायो, त्यो सकारात्मक छ । त्यसले धेरै भ्रष्टहरुको अनुहार उदांगो पारेको छ । यदि सरकारी वा प्रधानमन्त्री ओलीको नियत गलत हुन्थ्यो भने उनका विश्वांसपात्र विष्णु पौडेललाई कहिल्यै नभएको विवादमा पारेको यो घटना दवाउन खोज्ने थिएनन् ? पक्कै पनि खोज्ने थिए । तर, ओली वालुवाटार प्रकरणमा ‘निर्मम’ बनेको देखिन्छ, त्यहीकारण यो काण्ड छताछुल्ल भएको हो भन्नेमा स्पष्ट हुन्छ । आशा गरौं—देशैभरिका यस्ता काण्डहरु छताछुल्ल होउन र केन्द्रका मात्र होइन, प्रान्त र गाउं पालिका, नगरपालिकाहरुका पनि ‘गच्छेदार’हरुको नियत उदांिगओस्, ‘चन्द्रदेव जोशी’हरु नफसुन ।
माधव घिमिरेको बोली, गोकुल बाँस्कोटा काण्ड र देशको दलालीकरण शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६, १०:५२:००
डेपुटी गभर्नर प्रकरणः कार्पेट काण्डको पुनरावृत्ति र चिरञ्जीवी नेपालको भूमिका श्रेष्ठमाथि मुख्य तीनवटा आरोप लागेका छन् - एनसेललाई अनुचित तरिकाले लाभांश विदेश लैजान दिएको र सर्वाेच्चमा परेको मुद्धामा एनसेललाई सघाउ पुग्ने गरि काम गरेको, हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा रोकिएको विवादास्पद व्यापारी अजेय सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रकम फुकुवा गराउन चलखेल गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको । सोमवार, पुष २१, २०७६, ०९:३७:००
दिनेश प्याकुरेलको आत्मा, चन्द्रदेव जोशीको आंशु र नविन पौडेलको लालपूर्जा मंगलवार, माघ २८, २०७६, १०:२१:००
रहस्यमय भ्रष्ट स्थितिबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई मुक्त गर
कुन संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्दैछन् ओली - प्रचण्ड ?
सडक दुर्घटना र हाम्रो भूमिका
मेला महोत्सवका नाममा
माधव घिमिरेको बोली, गोकुल बाँस्कोटा काण्ड र देशको दलालीकरण
किन आवश्यक छ वैज्ञानिक विचार ?